Namuhla e-Ukraine kunezinhlobo ezingaphezu kuka-800 amanyuvesi, phakathi okuyinto endaweni ekhethekile ingenye izikhungo endala ephakeme Imfundo eMpumalanga Yurophu - Lviv National Ivan Franko University.
Kusukela ngomhla ka-2014, e Lviv National University abaqeqeshiwe cishe 14 000 abafundi, zazo kancane kuka 10,000 emfundweni esigcwele futhi kungathi izinkulungwane 3.5. Ngu ukuxhumana. Ngaphezu kwalokho, ukuvikelwa dissertation okulungiselelwe abafundi iziqu 812. Ngokuphathelene abasebenzi yezesayensi nasezinzuzweni mfundiso, 1,500 othisha 536 - osolwazi umhlobo, 157 - osolwazi 612 - abazobhapathizwa kwezesayensi 131 - odokotela wesayensi.
Lviv National University. Ivan Franko: kanjani ukuba uthole
Umzimba omkhulu LNU itholakala isakhiwo, okuyinto engxenyeni yokugcina yekhulu le-19 bahlangana Lesifunda Galician Sejm. Lesi sakhiwo esihle kakhulu isitayela classical lemva e ugodo ephuzi luhlotshiswe amakholomu kanye pediment yayo futhi kuvulandi, ungabona izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu engokomfanekiso "Umsebenzi", "Imfundo" nabanye. Futhi phezu olungaphambili lwesonto ayikwazi bekuqaphele isiqubulo ubudala wase-University of laseLvov Latin okuyinto uhumusha njengoba "izakhamuzi abafundile - umhlobiso njengezitha zezwe lokhokho." Ikheli isakhiwo eyinhloko LNU: Str. Sich Riflemen, 14, kanye nekheli zomthetho we nyuvesi - University Street, 1. Ngaphezu kwalokho, Dragomanov emgwaqweni, endlini 50, Faculty of Electronics itholakala. Ukuze uthole mgwaqo Sich Riflemen, ungasebenzisa trams ezazihamba emizileni 1 no-9, noma inombolo ibhasi 29 kanye nenombolo 29.
umlando Lviv Ivan Franko National University
Of LNU umlando ezithakazelisayo ngakho futhi engenakulibaleka, ngisho isifinyezo yayo uzodinga ikhasi angaphezu kwelilodwa. Engingakusho nje ukuthi yasungulwa ngesisekelo ongumJesuit College, esebenza e Lviv e 1608. Ngo-1661, Korol Yan II Casimir igunyaza lo mthetho kulesikhungo amalungelo inyuvesi. Ngakho, kuze kube 1773 University of Lviv kwaba ngaphansi kokuqondisa amaJesuit, futhi izinto eziyinhloko ezibhekwa yezenkolo, ifilosofi nangesiGreki. Ngemuva kokufaka Galicia imisebenzi Habsburg Empire of the umphakathi amaJesuit, njengoba namanye oda wamaKatolika, inqanyuliwe, kodwa imfundiso lwenziwe ngolimi Ukraine. Eminyakeni eyikhulu kamuva, ezindongeni Lviv University wafunda umlobi odumile isishoshovu sezombusazwe, Ivan Franko, ogama lakhe kwakuthiwa kunikezwa LNU (ke Leningrad State University) ngo-1940. Emashumini eminyaka yokugcina yekhulu lama-20 njengengxenye sesimanje nyuvesi lapha namuhla kwangena ubuchwepheshe zemfundo eminyangweni eminingana omusha angeke sehluleke ukujabulisa kothisha nabafundi kanye nomphakathi.
Faculty of Lviv University
Ngo LNU. Ivana Franko has 17 ikhono, kuhlanganise biology, yokuma komhlaba geography, izibalo isicelo nekhompyutha kwezesayensi, ezomnotho, electronics, journalism, umlando, kukhulunywa izilimi zakwamanye amazwe, ezobuciko namasiko, kwamaZwe, ngokomzimba, zefilosofi, zomthetho, i-chemistry, kolimi kanye Mechanics kanye ne-mathematics. Bahlanganisa 112 neminyango yokusebenza, futhi ezinye zazo kukhona Museum. Ngokwesibonelo, njengengxenye Faculty of Biology izenzo Zoological Museum, eyasungulwa ngesisekelo iKhabhinethi of Natural History, wavula ngo-1784, futhi ngo-Faculty of History - Archaeological Museum, okuyinto kubhekwa omunye izinto adumile edolobheni laseLviv.
izikhungo yezesayensi zemfundo ezisebenza ka Luhansk
Ngaphezu okungenhla, Lviv National Ivan Franko University yakhiwa lonke uchungechunge izikhungo yesayensi. Ngokwesibonelo, uma kusebenza: Botanical Garden, Observatory Astronomical, University History Museum, i-Centre for Information Technology lamazwe Nordic futhi izifundo yobuntu, ucwaningo nezikhungo frankovedeniya, Slavic, ukuhlanganiswa European nabanye abaningi. Kusukela izikhungo zemfundo ye LNU bafanelwe ekhethekile kukhulunywa Pedagogical kanye zomthetho amakolishi, Centre of ulimi Italian kanye classical lolimi esikoleni.
Imithetho lokungena ka LNU
Lviv National Ivan Franko University amukela izicelo sesifundo somuntu ngesikhathi undergraduate. Ukuze wenze lokhu, kumele ufake isicelo izitifiketi inyuvesi ZNO 3 izifundo izimo ezithile reception amanyuvesi Ukraine ngo-2014, kuye ngokuthi okukhethekile ekhethwe isicelo. Ngesikhathi esifanayo njengoba Lviv National University yaqanjwa Ivan Franko, ukungezwa isigaba ucwaningo, unelungelo ukucacisa uhlu lwezinto ukuncintisana.
nokubambisana nokuqeqeshwa bamazwe angaphandle International
Franko Lviv National University for esingaphezu konyaka, is bahileleke izinhlelo exchange of abafundi kanye kothisha. Minyaka yonke engaphezu kwekhulu abafundi ukulalela izinkulumo ezinezihloko ezihlukahlukene eyala emayunivesithi angaphandle. Ngaphezu kwalokho, abafundi amandla zomlando nokuma kwezwe umkhuba ezemfundo amanyuvesi Polish, eJalimane, Hungary, Slovakia, e-Austria futhi Czech Republic kanye nabasebenzi kolimi Mechanics kanye ne-mathematics, Chemistry Department, Faculty Wezangaphandle, futhi uMnyango Mathematics Esetshenziswayo futhi Computer Science internship e ukuqeqeshwa izikhungo yasePoland, France, Colombia, eSwitzerland nase-Austria. Ngokuqondene nabafundi bakwamanye amazwe, onyakeni (sinikeziwe United States futhi ngosizo University of Kansas) kwenziwe isikole ehlobo abafundi abavela e-United States, ngidlula internship lwamasonto ayisithupha ngesikhathi Lviv National University ngomlando Ukraine futhi ulimi Ukraine.
Alumni aqaphelekayo osolwazi
Lviv National University. Franko, okuzothi maduzane, ukugubha unyaka wayo 350th, iyona Mater alma amakhulu ezinkulungwane zabafundi abathole iziqu. Phakathi kwalabo abaye bathweswa iziqu lokhu inyuvesi, kukhona ososayensi abaningi, abaculi, osombusazwe nosomabhizinisi, ezaziwa kakhulu ngale kwemingcele yakwa-Ukraine. Ngokwesibonelo, ngaphandle Ivan Franko waphothula: edumile imbongi Ukrainian Bogdan Lepky, uMdali ngempumelelo yokugoma lokuqala kwakuyi-typhoid Rudolf Vaygl, owaqamba igama elithi "kohlanga" - Raphael Lemkin, elinye lamaphayona zanamuhla okungenzeka theory - Marku Katz nabanye abaningi. Hhayi ngaphansi kuka "Inkanyezi" kuyinto yokwakheka LNU futhi professorial. Kuyo yonke le minyaka, inyuvesi, safundisa: sezibalo oluvelele Stefan Banach, ummeleli ePoland ngo-League of Nations - Shimon Ashkenazi, le sezilimi esidumile - Ezhi Kurilovich physics eyaziwa Polish - uMarian Smoluchowski nabanye abaningi.
Izibuyekezo laseLviv National University simo yayo phakathi emayunivesithi e-Ukraine
Lviv Ivan Franko University lithole ngokuphindaphindiwe amamaki aphezulu izazi angaphandle futhu labetibambile ezingeni abaphezulu amazinga ezahlukene. Ngakho, ngo-2008, ngokubona abaqashi Ukrainian, ekolishi zibalwa wesine, 2012 - Webometrics esiteji lesithupha simo phakathi emayunivesithi e-Ukraine. Ngesikhathi esifanayo, labo asebamukele ukuba babe diploma laseLviv National University, baphikisa ngokuthi wathola ngaphakathi kwezindonga zawo ulwazi ukubasiza nokukhula komnotho okusheshayo umsebenzi, kanye ukuqhubeka nezifundo zabo emayunivesithi edume kakhulu eYurophu nase-United States.
Abafunda amandla ezihlukahlukene LNU eshicilelwe amaphephandaba amaningana, kuhlanganise electronic, BONKE UNIVERSITY ihlelwe imincintiswano ku Imibuzo "Yini? Kuphi? Nini?".
Compote okumnandi black currant: iresiphi for the ebusika